Full X-ray nke Samsung Galaxy S8 na asịrị na leaks niile ebipụtara | Akụkọ akụrụngwa
Full X-ray nke Samsung Galaxy S8 na niile asịrị na leaks bipụtara
Ihe ọ bụla ụbọchị anyị na-eteta na asịrị ọhụrụ banyere Samsung Galaxy S8 ọhụrụ, nke kpomkwem ma ọ bụrụ na ndị asịrị na-ada ada anyị ga-ama na eze n'ime kpuchie nke Mobile World Congress nke ga-amalite na a ụbọchị ole na ole na Barcelona. Dabere na ụfọdụ asịrị, ọhụụ Samsung ọhụrụ ga-adị na ahịa na ụbọchị mbụ nke Eprel.
Ọ bụrụ na anyị mepụtara bọọdụ na ụdị dị ọcha nke ụfọdụ n'ime ndị nchọpụta a ma ama n'ụwa, taa anyị ga-enwe mgbidi jupụtara na akwụkwọ akụkọ na asịrị niile na-apụta. Itinye ha n'usoro anyị ga-eme a zuru x-ray ka Samsung Galaxy S8 na niile asịrị na leaks bipụtaraYou dịla njikere, nyocha ibe?
1 Ihuenyo ga-enwe ihe ọ bụla okpokolo agba, ọ nwere ike ịdị larịị ma ọ bụ gbagọọ agbagọ
2 Ibu ihuenyo buru ibu, mana otu akụkụ
3 Igwefoto okpukpu abụọ ga-adị naanị na ụdị "Plus"
4 S Pen ga-abụ naanị okwu gbasara Galaxy Note
5 Bixby, Samsung olu olu ohuru
6 Performancerụ ọrụ karịa n'ụzọ ọ bụla
7 Mmiri na uzuzu na-eguzogide ọgwụ
8 Enwere ike iji Galaxy S8 dị ka a ga - asị na ọ bụ kọmputa
9 Anyị nwere ike ịzụta ya n'April
Ihuenyo ga-enwe ihe ọ bụla okpokolo agba, ọ nwere ike ịdị larịị ma ọ bụ gbagọọ agbagọ
On imewe nke Galaxy S8 anyị ahụwo a nnukwu ego nke leaked oyiyi, dị ka mgbe itịbe na ndị a, ụfọdụ na-egosi ịbụ kpam kpam ụgha, ma nke na-aghọ akụkọ. N'ime ndị anyị nwere ike ịtụle dị ka ndị dị adị, enwere ike ikwubi na anyị ga-ahụ na ihuenyo ga-fọrọ nke nta ka ọ bụla okpokolo agba na ga-ogide fọrọ nke nta dum n'ihu akụkụ.
Screendị ihuenyo ga-alaghachi na a AMOLED, dị ka ọ dị na mbụ na ngwaọrụ Samsung, ma ọ bụrụ na anyị ahapụ onwe anyị ka ọhụụ ndị kachasị ọhụrụ na-eduzi anyị, anyị agaghị ahụ bọtịnụ Homelọ ọdịnala, nke nwere ike ịbanye n'ime ihuenyo ma ọ bụ dị na azụ.
Otu n'ime nsogbu ndị a ga-edozi bụ nke mmewere nke ihuenyo ahụ, nke ahụ bụ na ọ bụrụ na mbụ e kwuru na Galaxy S8 niile ga-enwe ike ịrịgo ihuenyo gbagọrọ agbagọ, ugbu a ọ dị ka naanị anyị nwere ike ihu ihuenyo dị larịị , na-enweghị ọdịiche maka mbipute ọnụ. N'ezie, ịhụ ihe ịga nke ọma nke Galaxy S7 ihu nwere n'ahịa, ọ na-esiri ike iche na Samsung ga-ewepụ ihe ngebichi ya ngwa ngwa.
Na awa ndị ikpeazụ a video pụtara na netwọk nke netwọk, ebe Galaxy S8 yiri ka agbapụwo Samsung;
Ibu ihuenyo buru ibu, mana otu akụkụ
N'ihe gbasara ihe ndị anyị ka hụworo, anyị enweghị ike ịkwụsị ikwu banyere enwere ike ọhụụ nke Galaxy S8 na-enye anyị nnukwu ihuenyo. Ruo ugbu a, Samsung enwetala anyị ka anyị na-ahụ ọnụ na ihuenyo nwere ihu 5.5 sentimita asatọ. Ọnụ na-esote ụlọ ọrụ South Korea nwere ike ịdakwasị ahịa ahụ na nsụgharị abụọ dị iche iche, otu nwere ihuenyo 5.7-anụ ọhịa na nke buru ibu nke nwere sentimita 6.2.
Na nke mbụ, ngwaọrụ ahụ agaghị eto nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere obere nwanne ya nwoke, Samsung Galaxy S7 ihu, na akụkụ ya ga-adị ka nke a n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngụkọta nke iji ihu na nnweta nke ụlọ ahụ. n'ihu ngwaọrụ.
Igwefoto okpukpu abụọ ga-adị naanị na ụdị "Plus"
Dịka anyị kwurula, enwere ike ịnwe nsụgharị abụọ dị iche iche nke Galaxy S8, ụdị "nkịtị" yana ihuenyo 5.7-inch na ọzọ "Plus" nke nwere ihu igwe 6.2 nke nwere ike ime ihe dị iche site na itinye igwefoto abụọ, dị nnọọ ka Apple mere ya iPhone 7 Plus.
N'oge anyị maara nkọwa ole na ole banyere igwefoto abụọ a, mana enweghị obi abụọ ọ ga-abụ nhọrọ kachasị adọrọ mmasị, na-ahụ nsonaazụ ndị enwere ike nweta dịka ọmụmaatụ na igwefoto iPhone 7 Plus a. Ugbu a, anyị ga-echere iji hụ ma Samsung ọ gụnyere ya, ọ dị ka, na otu ụdị nke Galaxy S8 ma ọ bụ n'ikpeazụ kpebie ịnye ya na ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ ya niile, ihe doro anya ga-enwe ekele dị ukwuu.
S Pen ga-abụ naanị okwu gbasara Galaxy Note
Otu n'ime ebe nlegharị anya nke Galaxy S8 nwere ike ịnye anyị bụ enwere ike iji S Pen, nke ruo ugbu a naanị anyị nwere ike iji na Galaxy Note, nke dị ka anyị niile maara anaghị agafe oge kachasị mma mgbe nsogbu ndị kpatara ka ewepụrụ Galaxy Note 7 n'ahịa ahụ.
N'ezie, maka oge ahụ S Pen, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ dị ka asịrị, agaghị etinye aka na ngwaọrụ ahụ, dị ka a ga - asị na ọ na - eme na Galaxy Note, anyị ga - enwetakwa dịka ngwa ọzọ, na - enwekwa ilekọta ya ka ọ ghara ida ya site na-enweghị ike ịzọpụta ya na ngwaọrụ, ihe ga-abụrịrị n'ezie adaba.
Kedu ihe ọrụ S Pen nke Galaxy S8 ga-enye anyị ugbu a bụ nnukwu amaghị, nke anyị ga-ekpocha dị ka ọtụtụ ndị ọzọ n'ime ụbọchị ole na ole mgbe Samsung gosipụtara ọkwa ọhụrụ ya.
Bixby, Samsung olu olu ohuru
Samsung dị njikere ịkwado onye enyemaka olu ya ọhụrụ na nke aka ya, nke anyị ga-ahụ maka oge mbụ na Galaxy S8. N'oge anyị maara ya na aha BixBy, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ọ gaghị abụ aha gọọmentị nke o jiri banye ahịa.
Onye enyemaka olu ọhụrụ a ga-adị ka onye enyemaka Google nke dị na Google Pixel ma ọ bụ Siri na iPhone. Ọzọkwa, anyị ga-echere iji hụ ma BixBy na-ebi ndụ na nsogbu ahụ wee pụta na-enwe mmeri na ihu na ihu na ihu megide ọtụtụ ndị enyemaka olu ugbu a na ahịa.
Performancerụ ọrụ karịa n'ụzọ ọ bụla
Olee otú ọ ga-abụ na uzọ ọzọ, Samsung Galaxy S8 ga-akawanye na arụmọrụ nke arụmọrụ. Ọzọkwa na akụkụ a enwere nnukwu obi abụọ, mana ihe niile na-egosi na ọkwa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ South Korea ga-arịgo a Snapdragon 835 processor, ọ bụ ezie na anyị ga-ahụkwa mbipute na processor Exynos 8895. N'ọnọdụ ọ bụla, ụfọdụ nkwuba na-egosi na Smartphone ọhụrụ a ga-adị ike karịa 1.8 karịa Galaxy S7 ihu.
Banyere RAM, asịrị na-egosi na ọ ga-enwe 6GB RAM, ọ bụ ezie na enwerekwa nkwenye na enwere ike ịtọhapụ ya n'ahịa dịka otu n'ime ngwaọrụ mbụ nke ihe akpọrọ dị elu na 8GB nke Ram.
Mmiri na uzuzu na-eguzogide ọgwụ
E gosipụtara Galaxy S7 na nsụgharị ya abụọ n'ahịa na-adọrọ mmasị na-eguzogide mmiri na ájá, iji nwee ike iji ya ọbụlagodi ọnọdụ na-erughị ezigbo mma. Galaxy S8 ohuru ga enwe ozo IP68 asambodo, ihe ga - enye anyị ohere iji ya mee ihe ọ bụla na nke doro anya na ọ bara nnukwu uru maka ndị ọrụ niile na - agaghị echegbu onwe ha maka mmiri mmiri ozuzo, na - akpọrọ ya n'ụsọ osimiri ma ọ bụ tụda otu iko mmiri.
Enwere ike iji Galaxy S8 dị ka a ga - asị na ọ bụ kọmputa
Otu n'ime ihe ọhụụ ọhụrụ nke Galaxy S8 ga-enye anyị, yana ịrụ ụka adịghị ya na nke kacha adọrọ mmasị, ga-abụ ohere iji ngwaọrụ ọhụrụ a dịka a ga - asị na ọ bụ kọmputa, nke dị n'ụdị ihe Microsoft nyere anyị na Contiuum na Lumia ya 950 na Lumia 950 XL.
Baptizim dị ka "Samsung Desktop Ahụmahụ" Ọ ga-enyere anyị aka ịtinye ngwaọrụ anyị na ihuenyo ma rụọ ọrụ dị ka a ga - asị na ọ bụ kọmputa. Ihe a niile n'oge a bụ asịrị Samsung na-ekwenyeghi, ọ bụ ezie na anyị ahụla ọtụtụ mkpọtụ banyere ọrụ ọhụrụ a nke na-eduga anyị iche na ụlọ ọrụ South Korea na-arụsi ọrụ ike na ya, ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe ekwenyela. Dabere na ogo mmepe, anyị nwere ike ịhụ ya na Galaxy S8 ọhụrụ ma ọ bụ na anyị nwere ike ichere maka ọdụ ọhụrụ.
Anyị nwere ike ịzụta ya n'April
Na mbu ekwuputara na n'ihi nsogbu nke Galaxy Note 7 tara, batrị, Galaxy S8 nwere ike na-egbu oge na ngosi ya ma malite na ahịa. Nke a yiri ka ọ bụghị n'ikpeazụ na anyị nwere ike na eze izute ọhụrụ Samsung flagship na Nzukọ Ndị Na-ahụ Maka Mkpụrụ Obi nke ahụ ga-ebido n’ime ụbọchị ole na ole na Barcelona.
Otú ọ dị E nwere asịrị ndị ọzọ na-atụ aro na enwere ike igosi ekwentị ọhụụ n'ọnwa Eprel ọzọ wee bupụta ya n'otu ọnwa ahụ n'ahịa. N'oge Samsung ebidobeghị izipu akwụkwọ ịkpọ oku maka Unpacked, ihe doro anya na-enyo enyo maka ịdị nso na MWC. N'ezie, n'oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe ike ịchọpụta ma anyị ga-ahụ ya na Barcelona ma ọ bụ na anyị ga-echere izu ole na ole ọzọ.
Banyere ọnụahịa nke Galaxy S8 nwere ike ịnwe n'oge a, ọ nweghị ozi gafere, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọkachamara anwaalarị ịkpọsa na ọ nwere ike ịbụ ngwaọrụ nwere ọnụahịa dị oke elu, na-egosipụta n'ụzọ doro anya dị ka ọnụ ahịa gam akporo kachasị ọnụ na ahịa, na ọ dị ezigbo nso na ọnụahịa Apple iPhone 7 Plus taa.
Gịnị ka ị na-atụ anya n'aka ọhụrụ Samsung Galaxy S8 na a ga-eze n'ihu nnọọ anya?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Full X-ray nke Samsung Galaxy S8 na niile asịrị na leaks bipụtara
Microsoft wetara Cortana na mkpọchi ihuenyo nke gam akporo ọ bụla
Arụ ọrụ nke Moto G5 Plus gosipụtara dị ka ọhụụ ọhụrụ si dị